Uzovulelwa icala owenja enamarabi | Isolezwe
Uzovulelwa icala owenja enamarabi
Isolezwe / 3 September 2012, 09:43am /
UNKK Nikiwe Majola (kwesokunxele) uthi uzothathela izinyathelo zomthetho umnikazi wenja enamarabi elume indodana yakhe ebifihlwa izolo, uSiyabonga. Lapha uthathwe nodadewabo uNkk Lindiwe Majola enkonzweni yomngcwabo kaSiyabonga.	Isithombe: NOKUBONGWA PHENYANE
USETHATHE isinqumo sokuvulela abanikazi benja enamarabi elume yabulala indodana yakhe icala owesifazane wase-Tshelimnyama, eThekwini.
USiyabonga Majola (21), obengcwatshwa izolo ngemuva kokulunywa yinja enamarabi ngoJulayi 19, ushone ngoLwesihlanu oludlule.
UNkk Nikiwe Majola uthe ngeke ahlale athule angambophi umnikazi wenja njengoba indodana yakhe bekuyiyo ebondlayo ekhaya.
“Ingane yami bekuyiyo yodwa esebenzayo lapha ekhaya. Kuyimanje asazi nokuthi sizokwenzenjani kodwa ngibona kungcono ukuthi uma sekudlulile konke ngivulele umnikazi wenja icala lokubulala ngoba isimemezelo sokugoma izinja la endaweni sakhishwa,” kusho uNkk Majola.
Esibhedlela uthe uSiyabonga akaze alaliswe wajovwa imijovo emine wase enikwa amaphilisi kwaba kuyaphela njalo.
Uthe waqiniswa wukugula ngoLwesibili ngeledlule ngesikhathi ezwa ehlaselwa ngamakhaza waze wacabanga ukuthi uphethwe ngumkhuhlane.
Ngosuku olulandelayo kumqinise kakhulu kangangoba bese kunzima ngisho ukuthi adle, esebuyisa into engapheli.
UNkk Majola uthe waphelelwa yithemba mhla eya esibhedlela ayelaliswe kusona i-R K Khan emfica eseboshwe ngamaketango embhedeni, esedlikiza.
UNgqongqoshe woMnyango wezoLimo nezeMvelo, uDkt Meshack Radabe obehambele lo mngcwabo, uthe usishayela ihlombe isinyathelo somndeni sokuthi kuboshwe umnikazi wenja.
“Owesine lo muntu esimngcwabayo namhlanje asazi-ke ukuthi esingezwa ngabo beshona ngenxa yabantu abangagomi izinja zabo bangaki,” kusho uRadebe.
Uthe khona maduze bazofaka amabhodi amakhulu emigwaqweni yakuso sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal ukuqwashisa abantu ngalesi sifo nokuthi abagome izinja zabo.
URadebe uthe lesi sigameko bebengasilindele njengoba namanje kusekhona umfana wakwaNzuza, eMlazi oneminyaka emine obelaliswe eMshiyeni ngoba kusolwa ukuthi unesifo samarabi osedluliselwe esibhedlela i-Clairwood.
Uthe isimo sakhe sibucayi njengasekuqaleni abukabi bikho ubungcono kodwa odokotela basabatshele ukuthi kungase kucishwe imishini njengoba ingqondo yakhe ingasasebenzi.